Sida loo qariyo qayb ka mid ah raajada - Geofumadas
Febraayo, 2009 cadastre, Microstation-Bentley
Waxaan isku dayey inaan u sharaxo farsamayaqaan aan kombiyuutar ahayn saacad badhkeed, laakiin tan iyo markii aan jeclahay, waxaan qortaa habka halkan iyo nidaaminta latalinta bilaashka ah.
Waxaad leedahay sawir asal ah, laakiin waxaad rabtaa inaad qarsato qayb ka mid ah daabacaadda iyo ujeedooyinka bandhigida. Waxay leedahay Microstation V8.5
Ka hor inta aanan ka hadlin sida wax loo qabto Tani waxay la socotaa Descartes, laakiin ujeedka ujeedooyinka iskudhafidda dhowr jajab oo ku badbaadi sawirro cusub. Xaaladdan, ma aha waxa loo baahan yahay dhab ahaan sababtoo ah waxaa kaliya loogu talagalay ujeedooyinka aragti, looma jeedin in la gooyo sawirada.
Sidaas awgeed waa ikhtiyaari inay tahay in la sameeyo iyada oo la adeegsanayo raajada.
Maamulaha Raster, waxaad dooran kartaa muuqaalka aad rabto inaad qariso iyo xulashada "Edit / Clip"
Kadibna waxaa jira daaqad yar oo waydiisaneysaa:
... waxaad dooneysaa inaad sameysid clip, ma ii sheegi kartaa taas ???, ka dibna waa inaad doorataa qaabka gooyo iyo habka.
1 Ayadoo loo marayo walax
Waxaad yeelan kartaa shay la isku tuuray, taas oo ah mid xiran sida gorgortan. Sidaas awgeed waxaan doorannay xulashada xulashada, ka dibna Xudduudda Kacbada; Tani waa natiijada
Markaad doorato nooca sheyga (habka) aad qarineyso, waxaad qeexeysaa haddii aad rabto inaad ku qariso gudaha, ama geeska. Sababtani waa labada xul:
Galka Maskaxda, ayaa gudaha ku haya
Xudduudda Kacbada, waxay ku qarsoon tahay banaanka
2 Sawir gacmeed
Xaaladdan, waxaa suurtagal ah in la sameeyo miis aan lahayn shay, sababtoo ah waxaad dooran "Block" oo calaamadee sanduuqa leh jiirka. Kadibna riix cusub si aad u aragto natiijada.
3 Iyada oo loo maro xayndaabka
Haddii ay jirto xayndaab, waxay yeelan kartaa guryaha "fatahaada" waxayna noqon kartaa mid wax ku ool ah tirooyinka adag ama xuduudaha aan ahayn qaab muuqda. Marka hore xayndaabka waa in la sameeyaa, sidaas awgeed waxaa laga dooran karaa "Habka".
Sawirkan soo socda ayaa muujinaya kumbuyuutarro kala duwan, midab cas oo leh qaabka "Element", midkasi wuxuu ka gudbay "Deedka", kuwa kale "Block". Qof kastaa wuu wada noolaan karaa, sawirku waa isku mid.
Deedka this waa mid aad u macquul ah, sababtoo ah ee Microstation XM ama V8i daabacday dayrarka waa la badbaadin karaa sida haddii ay ahaayeen noocyo.
Waxaa sidoo kale jira "ikhtiyaari caqli" oo kuu ogolaanaya inaad wax ka beddesho xayawaanka, sida aad samaysay mid ka mid ah sanduuqyada. Si aad u tirtirto mid ka mid ah kumbuyuutarrada, isticmaal "edit / unclip" oo waxaad dooran kartaa qof ahaan ama dhammaan xuduudaha.
Soo koobida habka loogu talagalay farsamada casriga ah; kiiskan, waxaa jira sawir laga soo duubay Google Earth, waxaadna dooneysaa inaad ka gooyso khariidadda 1: 10,000
1 Soo wac raajada
2 Ku riix iyada maamulaha raajada
3 Kala beddel / sawir
4 Dooro habka "Block"
5 Xulo Mode "Xudduudda Clip"
6 Sameey sanduuqa leh jiirka: Si aad u dhaqdhaqaajiso saxaafada ctrl + shift
7 Guji shaashadda
Sababtoo ah xaqiiqda taas shuban waa ma dhab leydi, waxaad dooran kartaa "edit / beddeli clip" oo loo soo gudbiyo ugu shishaysa baahisey equinas siiyo SNAP shaqeysiin ctrl + wareeg
Mid ka mid ah jilayaasha
Nin, waxaan rajeynayaa in xitaa haddii ay tahay cabitaan jilicsan, waxay hoos u dhacdaa marka ay halkan yimaadaan ... maxaa yeelay taasi waxay ku jirtaa akhrinta.
Post Previous«Previous ProgeCAD, oo beddel u ah AutoCAD
Post Next Geofumadas wuxuu u raadiyaa af-Isbaanish si uu u turjumo turjubaankaNext »
3 Jawaab in "Sida loo qariyo qaybta raajada"
miguelsos isagu wuxuu leeyahay:
Weyn, ha waligin inaad u dhinto, wax ka badan 3D ha ilaawin. waad ku mahadsantahay
ma aha oo kaliya halis cusub, laakiin qadada wanaagsan oo sidoo kale.
Waxaan qiyaasayaa sida aan waqti u qaato si aan u sameeyo farsamadaan ...